Ngwaọrụ izizi nke Yutu nke China nke China - Akụkọ - Zhongshan Xiangdi Lighting Co., Ltd.
Ngwaọrụ izizi nke oke bekee nke China nyere
Mgbe anyị dị obere, anyị na-egekarị akụkọ ndị okenye na-agwa anyị banyere ọnwa.Ọ bụ echiche kachasị mma nke ndị mgbe ochie na ememme etiti-etiti. Mgbe anyị toro, anyị ma na Armstrong hapụrụ akara mmadụ nke mbụ na ọnwa. Seemmụ mmadụ na-emeri mbara ala, ma ụkọ dị omimi na agụụ na-agụsi ike na-apụ n'anya.
Changsha IFS China jade mbụm nke oke bekee ji arụ arụ ọrụ
Ememe a na-eme n’etiti, Moonbọchị nke Ọnwa Star, na-akụda ọdịnala, njikọ nke ihe, nwere ezigbo njem ihunanya na nke dị mma maka ọnwa. Ikwesighi ịbanye ọnwa ma gaa na Changsha IFS iji bido ahụmịhe Star City.
Kemgbe mmalite nke Changsha IFS, ọ nọwo na-elezi ịdị ọcha nke ogige ihe osise L7. Kedu ihe ọ bụ? Ememe Ugbo-etiti, gịnị ka ọ ga-eme n’ikpeazụ?
Kedu ihe kpatara mpempe akwụkwọ oke bekee ji gbanwee ka ọ bụrụ enyi ọnwa? N'ezie ọ bụ teknụzụ ojii! Ngwa ihe osise China nke eserese 3D pụrụ ime ihe osise na ndị nka Portuguese bụ ugbu a n'ịntanetị!
Changsha IFS sonyeere onye omenkà Portuguese Carole & Nuno iweta ngwaọrụ China izizi nke oke oke bekee, na-akpọ gị oku ka ị mee akwa ọhụụ maka oke bekee na-acha ọcha, na-eji ihe ngosi ọhụụ na - eme akụkọ ọdịnala, ma na - enwekwa ọwụwa anyanwụ na omenaala ọdịda anyanwụ na Changsha IFS. Amara
Teknụzụ igwe eletrik dị ike na-enye gị ohere ịbụ onye na-ese ihe, akwụkwọ bekee na-aghọ kwaaji You nwere ike mee ka ụbụrụ gị sakwuo mbara ma jiri nchịkọta dị iche iche nke ìhè na ndo iji mepụta ọkụ gị na oke bekee.